A Kpọkuola Ndị Bi n'Akụkụ Ogbu Mmiri Ka Ha Kwagharịa Ọnọdụ
Oku a bụ nke a kpọrọ n'Awka bụ isi obodo steeti ahụ dịka ndị otu ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka ọnọdụ gbanụ gbanụ n'ala anyị, bụ National Emergency Management Agency (NEMA) wụchara na steeti ahụ iji mara ka ọchịchị steeti ahụ siri dịdobe nkwádo n'iche ya bụ oge iju mmiri a na-atụ anya ya n'ahọ a.
Ndị otu a bụ ndị e duru bịa site n'aka onyeisi ngalaba na-ahụ maka ime nnyocha na ikwu ihe ga-eme n'ọdịnihu n'ụlọ ọrụ ahụ, bụ maazị Vincent Owan, ma bụrụkwa ndị a nabatara site n'aka osote aka na-achị steeti ahụ bụ dọkịta Nkem Okeke.
N'okwu ya na nnọkọ ahụ, maazị Owan mere ka a mara na dịka nchọpụta ha mere siri wee dị, na ya bụ iju mmiri ga-warịrị n'ahọ a, beere sọ ma Chineke o jiri aka ya kwuo na ọ gaghị awa. Ọ kọwara ọbịbịa ahụ dịka nke dị oke mkpà n'ihi na e kwesiri ibido n'oge wee kwadobe maka ọbịbịa ya bụ iju mmiri, ka ihe mere n'ahọ 2012 wee gharazie ime n'ahọ a ma ọ bụ ka ọ gbara ịdị ka ya bụ iju ọ wara na mberede.
Ọ gakwara n'ihu mee ka a mara na ọbịbịa ahụ abụghị naanị ịgwa gọọmenti steeti ahụ ka ha dịkwa njikere, kama, ha chọkwara iji ohere ahụ maa ọkwa ya bụ iju mmiri ka onye ọbụla ga-anụ ya, kụziere ndị mmadụ ihe ha kwesiri ịma banyere nke ahụ ma marakwa ihe ọchịchị steeti ahụ na-akwadobe n'ichere ya bụ oge a na-atụ anya ya, ọ bụnadị dịka o mere ka a mara na ụfọdụ ndị bi n'akụkụ mmiri na steeti Kogi akwagharịala ọnọdụ ugbu a, ebe a na-amakwara ndị bi na steeti Rivers na steeti dị ọzọ ọkwa ugbu a maka ya bụ idè mmiri.
Na nzaghachi ya, dọkịta Nkem Okeke kwara arịrị banyere otu iju mmiri sirila wee bụzie omenahọ n'ala anyị ugbu a, ma bụrụkwa nke na-emezi ka ndị mmadụ chịrị uche n'aka. O mere ka a mara na ọchịchị steeti ahụ adịla njikere ma tinye atụmatụ dị iche iche n'ọrụ maka ọnọdụ gbanụ gbanụ, ma kpokuokwa gọọmenti etiti ka ọ gbaa mbọ tụnye ụtụ nke ya n'ịkwàdo agbam mbọ ahụ ha na-agba. O kwere nkwa enyemaka nke ụlọ na-ahụ maka ọnọdụ gbanụ gbanụ na steeti ahụ, ọ bụnadị dịka o gosipụtara ezi olile anya o nwere na ihe ahụ mere n'ahọ 2012 agaghịzị eme ruo otu ahụ n'ahọ a.